Ungakhubaza kanjani izikhangiso ze-YouTube ku-TV | TeraNews.net
umbhali artem Kushicilelwe ku 07.12.2018
Kunesixazululo esenziwe kangcono kakhulu se-17-10-2020: I-SmartTube Next - ulwazi oluningi!
Wonke umuntu uyayithanda imali, futhi Abadali besiteshi se-YouTube bayayihlukile. Yini ungenzi imali kuzikhangiso ezishumekiwe zevidiyo? Abasebenzisi bamakhompiyutha namadivayisi eselula, abathuthukisi benze uhlelo oluhle lwe-AdBlock. Kepha azikho izinhlelo zamahhala zensiza ye-YouTube ku-Android. Ngemuva kwakho konke, izinqumo ezivala izikhangiso ku-YouTube, kodwa zikhangise okuthile ngokwazo, ngeke zibizwe zilungile. Ungakukhubaza kanjani ukukhangisa ku-YouTube ku-TV kuyinkinga ephuthumayo kubo bonke abanikazi bama-TV ane-Smart TV eyakhelwe ngaphakathi.
Isifiso, amandla okusebenzisa isilawuli kude nokubekezela kuyisethi yezidingo zomsebenzisi onquma ukuqeda ukukhangisa ku-YouTube. Iqiniso ngukuthi izilungiselelo ezenzelwe i-TV azisetshenziswa ngaso leso sikhathi. Kusuka "kwimemori", i-TV ingakhipha idatha yakudala futhi ikhombise izikhangiso ezivinjelwe amahora angama-1-4 kumodi yokubuka ividiyo ku-YouTube.
Ungazivala kanjani izikhangiso ze-YouTube ku-TV
Kokulawulwa kude, kunoma iyiphi imodi ye-TV, cindezela inkinobho ethi "Izilungiselelo" / "Izilungiselelo". Kwiphaneli yokulawula evulayo, yenza i-algorithm elandelayo yezenzo:
Thola ithebhu "Izilungiselelo ezijwayelekile" bese uya kuyo.
Thola imenyu "yenethiwekhi" bese uya kuyo.
Khetha "isimo senethiwekhi".
Linda kuze kuxhumeke ku-inthanethi kuqinisekisiwe bese ukhetha imenyu ye- “Izilungiselelo ze-IP”.
Beka isikhombisi kuthebhu "Yezilungiselelo ze-DNS" bese ushintsha ibhokisi lokuhlola lisuka ku- "Thola ngokuzenzakalela" liye ku- "Faka ngesandla".
Chofoza endaweni ethi “DNS Server” evela ngezansi bese ufaka ikheli le-IP: 176.103.130.130 ewindini elivulayo.
Cindezela inkinobho ethi "Kulungile", bese ushiya iphaneli yokulawula usebenzisa inkinobho "Return".
Njengoba sesitholile ukuthi singazicisha kanjani izikhangiso ze-YouTube ku-TV, ake siqhubekele phambili kubuhle nobubi. Izenzo zomsebenzisi zibhala ikheli leseva le-Ad Guard ku-TV. Okusho ukuthi, ividiyo ngeke ihambe ngqo, kepha iseva yenkampani evela eceleni. Umgcini uvimba izikhangiso. Inzuzo isobala - akukho ukuphazamiseka ezikhangisweni zevidiyo ezingadingekile.
Uhlangothi lwe-flip lwalesi silungiselelo lubeka engozini umsebenzisi. Ukugunyazwa esiteshini se-YouTube kudlulisa iphasiwedi ngendlela ebethelwe nge-server yomunye umuntu. Inkampani yakwa-Adguard ibona izintshisekelo zomsebenzisi futhi igcina izibalo zayo. Nakhu okuya kumsebenzisi ukuthi anqume ukuthi yikuphi okubaluleke kakhulu - ukuphepha noma ukubukwa ngokunethezeka kwamavidiyo ku-YouTube.
I-PS 17-10-2020 kukhona isixazululo esenziwe kangcono kunazo zonke: I-SmartTube Next - ulwazi oluningi!